Waa tan Samuel Eto'o oo ku riyooday riyadii kow iyo tobnaad ee Ballon d'Or - teles relay
Halkan waxaa ah dhawaaqii weynaa ee Samuel Eto'o ee riyadii kow iyo tobnaad ee abaalmarinta Ballon d'Or
Kabtankii hore ee Indomitable Lions Samuel Eto'o ayaa ka falceliyay Twitter-ka kooxda ugu fiican taariikhda kubada cagta. Garsooriyaasha ka qayb qaata codbixinta Kubada Dahabka Yurub, oo la bixiyo sannad kasta ilaa 1956 majaladda France Football, waxay ku xusheen hadba shuruudahooda, kow iyo tobanka ciyaartoy ee taariikhda ugu fiican.
Waxay kala yihiin Lev Yachine (RUS) - Cafu (BRE), Franz Beckenbauer (ALL), Paolo Maldini (ITA) - Pelé (BRE), Lothar Matthäus (ALL), Xavi Hernandez (ESP), Diego Maradona (ARG) , Lionel Messi (ARG), Ronaldo (BRE), Cristiano Ronaldo (POR).
Samafalaha wuxuu wax ka beddelaa masiirka cunuggan loola dhaqmay sidii sixirroole oo ay ka tageen waalidkiis-Sawirro
Majaladda ciyaaraha France Football ka dib waxay soo jeediyeen koox B iyo C ah oo ka kooban ciyaartoy la magacaabay, laakiin ugu dambayntii waa ku guuldareysteen xeer beegtida. Waxaa jira halyeeyo sida Zidane, Cruyff, Di Stefano, Platini, Henry, Ronaldinho iyo Iniesta.
Laba qaabab oo kale ayaa sidoo kale soo baxay wadar ahaan saddex Kow iyo toban. Laakiin, 33-ka ciyaartoy ee la xushay, ma jiro mid Afrikaan ah. U fiirsasho aan ku guuldareystay inuu la tartamo Samuel Eto'o. Weeraryahankii hore ee reer Cameroon ee Barça ayaa ku calaacalay maqnaanshahan: "Annagu Afrikaanku ma jirno." ayuu ku qoray twitter.
Célestin Djamen xoghayihii hore ee MRC wuxuu khiyaameeyay Maurice Kamto
Hase yeeshe ciyaartoy waa weyn sida Thomas Nkono, Samuel Eto'o ama xitaa Georges Weah ayaa u qalmay in lagu daro liiskan.
Kubadda dahabkaafkasamuel eto'o
Waxaan tijaabiyay dalabkeyga Way + oo ka socda Orange Cameroon
100% Coupé Décalé: BB sans OS waxay ku andacooneysaa in DJ ARAFAT uu yahay farshaxan sameeye qoob ka ciyaaraya si xun - Video